Kitapo tsy voatenona D-Cut
Kitapo misy tady tsy tenona
Kitapo vita amin'ny landihazo misy Gusset ambany
Kitapo vita amin'ny kofehy vita amin'ny landihazo
Kitapo vita amin'ny lamba vita amin'ny landihazo
Cotton Canvas Tote misy Gusset
Kitapo vita amin'ny landihazo Canvas Zipper
Kitapo vita amin'ny lamba vita amin'ny landihazo tsotra
Kitapo fiantsenana azo aforitra
Ahoana ny fisafidianana tsara ny fitaovana sy ny teknolojian'ny kitapo fanomezana mba hahatonga azy ireo ho maro loko kokoa?
Fotoana fandefasana: Aug-15-2021
Ahoana ny fisafidianana tsara ny fitaovana sy ny teknolojian'ny kitapo fanomezana mba hahatonga azy ireo ho maro loko kokoa? Ny kitapo fanomezana taratasy no kitapo famonosana malaza indrindra amin'izao fotoana izao. Noho ny vidiny mora sy ny vokatra fanontana tsara dia tian'ny orinasa maro izy io. Inona àry no fitaovana fototra amin'ny kitapo fanomezana taratasy?...Hamaky bebe kokoa »
Ny foto-kevitra momba ny fiarovana ny tontolo iainana dia malaza be, ary ny mpanamboatra kitapo lamba dia manome fahafahana vaovao
Fotoana fandefasana: Aug-13-2021
Ny foto-kevitra momba ny fiarovana ny tontolo iainana dia malaza be, ary ny mpanamboatra kitapo eco canvas dia manolotra fahafahana vaovao amin'ny fiainana andavan'andro, satria ny tora-pasika sy ny fikasihan'ny kitapo lamba Oxford ary ny harona eco canvas dia mitovy, maro ny olona tsy afaka manavaka ny lamba. kitapo ma...Hamaky bebe kokoa »
Inona no karazana tote bags eco-friendly no mora ampiasaina sy tsara tarehy?
Inona no karazana tote bags eco-friendly no mora ampiasaina sy tsara tarehy? Hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao, ny kitapo famonosana ara-tontolo iainana dia efa ela noho ny fitahirizana entana. Amin'ny fampiasana bebe kokoa sy mivelatra kokoa, tsapantsika tsikelikely fa afaka manao tsaratsara kokoa izy io, mahatonga azy io ho mora kokoa sy reas...Hamaky bebe kokoa »
Fanasokajiana ny kitapo tsy voatenona sy ny fanontam-pirinty matetika ampiasaina
Fanasokajiana ny kitapo tsy voatenona sy ny dingan'ny fanontam-pirinty matetika Ny lazan'ny kitapo fanaovana dokam-barotra tsy voatenona dia mahatonga ny fampiharana ny kitapo tsy voatenona bebe kokoa, ary mihamaro hatrany ny indostria azo ampiharina. Anio, ampahafantarina fohifohy ny fanasokajiana...Hamaky bebe kokoa »
Inona avy ireo lafin-javatra tokony hatombotsika amin'ny fanaovana kitapo mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra vita?
Fotoana fandefasana: Aug-07-2021
Inona avy ireo lafin-javatra tokony hatombotsika amin'ny fanaovana kitapo mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra vita? Ny tanjona lehibe indrindra amin'ny fonosana dia ny fiarovana ny entana, mba tsy ho simba, ho very, hivoaka ary hiharatsy ny entana mandritra ny fizotran'ny fitehirizana, fitaterana ary fivarotana. ...Hamaky bebe kokoa »
Inona no tokony hotandremantsika rehefa manao pirinty poketra? Tsipiriany kely dimy ho an'ny fanontana kitapo
Inona no tokony hotandremantsika rehefa manao pirinty poketra? Tsipiriany kely dimy ho an'ny fanontana poketra Rehefa miantsena isika, ny zavatra tena entintsika eny an-tananay dia kitapo. Inona no fantatrao momba ny poketra? Inona no tokony hotandremantsika rehefa manao pirinty poketra? 1. Tandremo ny fisafidianana ny tsihy...Hamaky bebe kokoa »
Fitaovana mahazatra maromaro amin'ny fanamboarana kitapo misy tady!
Fitaovana mahazatra maromaro amin'ny fanamboarana kitapo misy tady! Ny mpanamboatra sy ny mpanjifa izay nanjaitra kitapo lamba dia mety mahafantatra fa ny lamba malefaka rehetra dia azo atao amin'ny firafitry ny kitapo fitehirizana tady. Ny kitapo fanasan-damba mahazatra indrindra dia vita amin'ny landihazo, lamba rongony, polyester, volory, tsy tenona ary hafa ...Hamaky bebe kokoa »
Ataovy mora ny lamaody "mpanjakan'ny tontolo iainana" miaraka amin'ny kitapo vita pirinty
Fotoana fandefasana: Aug-01-2021
Mora ny manao lamaody "mpanjakan'ny tontolo iainana" miaraka amin'ny kitapo vita pirinty Tao anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona, ​​lasa karazana vokatra maitso eo amin'ny tsenan'ny mpanjifa ny kitapo lamba. Ny endri-javatra lehibe indrindra dia ny fiarovana ny tontolo iainana ary azo ampiasaina indray. Rehefa mandeha ianao...Hamaky bebe kokoa »
Fampiasana ara-tsaina ny fako hanaovana kitapo maitso
Fampiasana ara-drariny ny fako hanaovana kitapo maitso Ny fikatsahana ny fiarovana ny tontolo iainana maitso sy ny famaliana ny tontolo iainana tsy misy karbônina no fitsipika fototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana any Shina. Mba hamaliana am-pahavitrihana ny "baiko fameperana plastika" ary miaro ny fiaraha-miasa maitso ...Hamaky bebe kokoa »
Ny fampiasana kitapo mitsinjo ny tontolo iainana dia manamora ny fiainantsika amin'ny fiainana ambany karbônina
Ny fampiasana kitapo mitsinjo ny tontolo iainana dia mahatonga antsika ho mora ny miaina fiainana ambany karbôna Ahoana no ahafahantsika miaina fiainana ambany karbaona? Tamin'ny taonjato faha-21, ny teny hoe “karbônina ambany” no lasa teny malaza indrindra mba hisarihana ny sain'ny besinimaro. Izy io dia mitondra sakafo mahasalama sy miaro ny tontolo iainana...Hamaky bebe kokoa »
Sakafo ara-tontolo iainana: toa tena mitsinjo ny tontolo iainana? Fa ny fomba fampiasanao azy dia tsy ambany karbaona!
Fotoana fandefasana: Jul-26-2021
Sakafo ara-tontolo iainana: toa tena mitsinjo ny tontolo iainana? Fa ny fomba fampiasanao azy dia tsy ambany karbaona! Nandritra ny am-polony taona fara fahakeliny, ny olona dia nampianarina ny tombontsoa azo avy amin'ny kitapo fiantsenana azo entina - ilay antsoina hoe "Tote Bags". Voalaza fa zavatra tsara ny kitapo fiantsenana azo ampiasaina indray ...Hamaky bebe kokoa »
Extractor kitapom-batana: toekarena ambany karbaona, manomboka amin'ny kitapo fiarovana ny tontolo iainana maimaim-poana ny fiainana maitso
Fotoana fandefasana: Jul-24-2021
Mpanondrana kitapom-batana: toekarena ambany karbaona, manomboka amin'ny kitapo fiarovana ny tontolo iainana maimaim-poana Ny fiarovana ny tontolo iainana dia lohahevitra mandrakizay. Raha mbola tsy afa-misaraka amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny fampandrosoana ara-toekarena, dia mifandray akaiky amin’ny fiainan’ny olona sy mifandray amin’ny fut...Hamaky bebe kokoa »
Telefaonina: 0086 15184479681